PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - Ziyaqhubeka izivivinyo eMbuyiselo
Ziyaqhubeka izivivinyo eMbuyiselo
Isolezwe - 2017-11-13 - IZINDABA - PHILI MJOLI
KUZOQHUBEKA namuhla ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka esikoleni iMbuyiselo High, eMandeni.
Kulesi sikole bekumisiwe ukubhala kuGrade 8 kuya kuGrade 11 ngemuva kokulalelwa unyendle komfundi kaGrade 12 ephuma kotadisha ngesonto eledlule.
Lo mfundi oneminyaka ewu-17 okuthiwa wagencwa ngocelemba washaywa ngesagila ngabantu abangaziwa, usesibhedlela. Kusolwa ukuthi ukulinyazwa kwakhe kuhlobene nempi yabafundi besigodi sakwaMhlongo nesakwaBiyela eqhubekayo kulesi sikole.
Abafundi bakulezi zigodi kuthiwa babambelana amagqubu uma kade bengcweka emicimbini eba ngezimpelasonto. Uma sebesesikoleni baqhubeke nokulwa.
Ngemuva komhlangano wabazali noMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal obungowabakhethiweyo obukulesi sikole ngoLwesihlanu kunqunywe ukuthi kuqhutshekwe nokubhala.
Isikhulu salo mnyango, uMnuz Raymond Penniston, uthe bavumelene nabazali ukuthi abafundi babhale izifundo ezisele.
Laba bafundi bazobhala begadwe ngamaphoyisa kusukela namhlanje kuze kube nguMsombuluko ozayo.
“Okwamanje sivumelene nabazali ukuthi singangeni ezintweni eziningi eziholele ekutheni kube nezinxushunxushu phakathi kwabafundi kodwa senze isiqiniseko sokuthi bayabhala izivivinyo zabo. Kuzothi uma seziphothuliwe izivivinyo siphinde sibize omunye umhlangano esizodingida kuwo ezinye izinkinga. Lapho sizobe sesibonisana nangokuthi abafundi abathintekayo ezenzweni zobudlova esikoleni bajeziswa kanjani,” kusho yena.
Isithombe: ZANELE ZULU
IZIKHULU zoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Raymond Pennington noDkt Ngogi Mahaye abebeyingxenye yomhlangano obusesikoleni iMbuyiselo eMandeni wokukhuza udweshu phakathi kwabafundi bakulesi sikole